စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
နေအိမ် > စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် CFL ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် CFL
2. CFL အကြောင်း 3. စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. CFL လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: CFL ရထားတွေကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. တိုတောင်းသောအချိန်အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, နှင့် CFL အပေါ်နေ့ကလက်မှတ်တွေ 7. CFL ကြေးပေးသွင်းမှုရှိပါသလား
8. CFL မထွက်ခင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲငါရောက်လာဖို့လိုတယ် 9. CFL ရထားဇယားကဘာလဲ
10. ဘယ်ဘူတာများကို CFL ကတာဝန်ယူတယ် 11. CFL မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် CFL
အချိန်တိကျမှုနှုန်းဖြင့် 96%, CFL (တရားဝင်လူဇင်ဘတ်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ) ရထားသည်ဥရောပတွင်အများဆုံးသောရထားလမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, CFL ကြာပါသည် 25 လူ ဦး ရေသန်းနှင့် 105 လူဇင်ဘတ်နှင့်ဥရောပတစ်လွှားရှိသူတို့၏ ဦး တည်ရာနေရာများသို့ကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန်သန်းတစ်ရာ.
CFL သည်အလွန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေသည်, CO2 - အခမဲ့ဖြစ်သည်, နှင့် 100% သူတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအားလုံးသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှဖြစ်သည်.
CFL, လူဇင်ဘတ်ရထားလမ်းအမျိုးသားလူ့အဖွဲ့အစည်း, လူဇင်ဘတ်အမျိုးသားမီးရထားလမ်းအတွက်အခြားအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက 1946, CFL သည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသားများကိုမိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်.
CFL ကမ်းလှမ်းမှု လူဇင်ဘတ်အတွင်းရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ဥရောပတစ်လွှား. လက်ျာလက်မှတ်နှင့်အတူ, သငျသညျအပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဥရောပမှာအားလပ်ရက်နေရာများ. လက်မှတ်အမျိုးအစားများနှင့်အတူ, CFL လူတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ဖြည့်တင်း.
CFL ရထားများမကြာခဏရထားလမ်းဖြစ်ကြသည်, လူဇင်ဘတ် – ဘရပ်ဆဲလ်, လူဇင်ဘတ် – ပဲရစ်, Ettelbruck – Liege, Wasserbillig- ဒစ်စကောလ်. သင်သည်ဥရောပရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ CFL ရထားဖြင့်သွားနိုင်သည်: ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်.
ကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖြတ်ပြီး, 3,090 ဝန်ထမ်းများသည်သန်းပေါင်းများစွာသောခရီးသည်များမိမိတို့၏နေရာသို့နေ့စဉ်ရောက်ရှိရန်သေချာစေရန်ရထားလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ CFL အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်:
စျေးပေါ CFL ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ CFL လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာထားပါ
စျေးနှုန်း CFL ရထားလက်မှတ်တွေ ခရီးသွားသည့်နေ့နီးသည်နှင့်အမျှထတတ်သည်. သင်၏ငွေ CFL ရထားလက်မှတ်ကိုထွက်ခွာသည့် နေ့မှစ၍ ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေးကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင်ငွေစုနိုင်သည် (ပုံမှန်အားဖြင့်3ရှေ့လသည်အများဆုံးဖြစ်သည်). ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကသင်စျေးအသက်သာဆုံး CFL ရထားလက်မှတ်ရရှိရန်သေချာစေသည်. သူတို့ကအစအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်, ဒါကြောင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်အမိန့်, မင်းအတွက်စျေးသက်သာတယ်. ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ CFL ရထားလက်မှတ်တွေပေါ်မှာ, သင့်လက်မှတ်ကိုစောစောဝယ်ပါ.
ဂဏန်း 2: Off- အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း CFL အားဖြင့်ခရီးသွားလာ
တိုင်းရထားလမ်းအော်ပရေတာနှင့်ဝသကဲ့သို့, CFL ရထားလက်မှတ်တွေက အဆိုပါ Off- အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းချိုသာ, တစ်ပတ်၏အစမှာ, နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. သင်ရရန်သေချာပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း. အင်္ဂါနေ့မှာ, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, CFL ရထားလက်မှတ်သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်. သောကြောင့်၏အသံအတိုးအကျယ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက် နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခရီးသည်, ရထားလက်မှတ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ပိုကုန်ကျတယ်. ဒါဟာမနက်နှင့်ညနေခင်းအသွားအပြန်အကြားအချိန်မရွေးခရီးသွားရန်ဝေးစျေးနှုန်းချိုသာသည်. တနင်္ဂနွေသည်ရထားများအတွက်အခြားအထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့များတွင်ဖြစ်သည်. CFL ရထားလက်မှတ်ဈေးနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လာသည် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ, နှင့်ဥရောပ၌ကျောင်းအားလပ်ရက်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်3တစ်ခုချင်းစီကိုရက်သတ္တပတ်.
ဂဏန်း 3: သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ကိုသေချာစွာသိပါကသင်၏လက်မှတ်များကို CFL တွင်မှာယူပါ
CFL ရထား မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်အနည်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူ, ၎င်းတို့သည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးလဲရထားလမ်းအမျိုးအစားမဟုတ်ရင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားတယ်၊ ပြန်အမ်းမယ်။. သင်လက်မှတ်များကိုလူများအားရောင်းနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိနေသေးသော်လည်း, CFL အနေဖြင့်လက်မှတ်ရောင်းအားကိုခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်ဇယားသေချာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တစ်ခုခု ၀ ယ်ပြီးမူလ ၀ ယ်ထားသောလက်မှတ်ကိုမသုံးနိုင်သောကြောင့်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ကြိမ်ကြိုတင်မှာယူခြင်းမှသက်သာစေလိမ့်မည်။.
ဂဏန်း 4: သင်၏ CFL လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
ရထားကိုသိမ်းဆည်းပါအကြီးဆုံးရှိသည်, အကောင်းဆုံး, နှင့်ဥရောပရထားလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအပေးအယူ. မီးရထားအော်ပရေတာများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောဆက်ဆံရေး, မီးရထားလက်မှတ်ရင်းမြစ်များမှာ, နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်နည်းပညာ algorithms ငါတို့အသိပညာ, ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ရောင်းဝယ်မှုကိုခွင့်ပြုပါ. CFL တစ်ခုတည်းအတွက်စျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူး; CFL အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွင်းမှာ လူဇင်ဘတ်၏ Grand Douchy တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မရရှိနိုင်ပါ, သင်နိုင်ငံသားဖြစ်လျှင်လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်သည်. သို့သျောလညျး, 1CFL ရထားပေါ်တွင် st အတန်းအစား, အမြဲတမ်းပိုက်ဆံကုန်ကျတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကလည်းစျေးကြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိကြပေ. CFL ရထားလက်မှတ်သည်ရထားတစ်စီးတည်းအတွက်ယူရို ၃ မှ ၆ ဒေါ်လာအထိဖြစ်သည်. အဆိုပါ CFL ရထားလက်မှတ်၏စျေးနှုန်း သင်ဝယ်ယူသည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့်သင်ခရီးသွားရန်ရွေးချယ်သည့်အခါပေါ်တွင်မူတည်သည်:
အချိန်တို € 3
နေ့ - လက်မှတ် € 6
ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: CFL ရထားတွေကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
1) မင်းအမြဲတမ်း City Centre ကိုအမြဲတမ်းရောက်တယ်. ၎င်းသည်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CFL ရထား၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. CFL ရထားနှင့်အားလုံး အခြားရထားခရီးသွားလာ မြို့၏မည်သည့်နေရာမှမဆို၊. လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိအချိန်အတော်အသင့်သက်သာစေတယ်. ရထားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, သင်သွားလိုသည့်မြို့၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်. သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ, ဘရပ်ဆဲလ်, နန်စီ, ပဲရစ်, ဒါမှမဟုတ်အမ်စတာဒမ်, မြို့လယ်ခေါင်သည် CFL ရထား၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်! ဥပမာ, လူဇင်ဘတ်လေဆိပ်သည် 20 မိနစ်အကွာအဝေးအလယ်ဗဟိုနှင့်.
2) အနည်းဆုံးလေယာဉ်ပျံဖြင့်ခရီးထွက်ရန်သင့်အားအနည်းဆုံးလေဆိပ်သို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည်2သင်၏ပျံသန်းချိန်မတိုင်မီနာရီ. လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကိုသင်လုပ်ရလိမ့်မည်. CFL ရထားနှင့်အတူ, သင်ရုံထက်လျော့နည်းဘူတာရုံမှာဖြစ်ဖို့ရှိသည် 30 ကြိုတင်မိနစ်အနည်းငယ်. သင်အချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားသောအခါလေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရန်အချိန်ယူရသည်, သငျသညျ CFL ရထားအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် စုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ.
3) CFL ရထားလက်မှတ်တွေကိုသင်လေယာဉ်လက်မှတ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တောင်စျေးပေါတယ်. ထို့အပြင်, သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးစွဲချက်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, CFL ရထားလက်မှတ်တွေမှာပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းသဘောတူညီချက်ရှိတယ်. ရထားစီးရန်မလိုသောခရီးဆောင်အိတ်များကဲ့သို့အခြားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူ, CFL အားဖြင့်ခရီးသွားလာ အကောင်းဆုံး.
4) ရထားများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေသည်. ရထားနှင့်လေယာဉ်ပျံအကြားနှိုင်းယှဉ်ပါ, ရထားအမြဲထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်. လေယာဉ်များသည်၎င်းတို့စွန့်လွှတ်လိုက်သောကာဗွန်ဓာတ်များနှင့်အတူလေထုကိုအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းစေသည်. နှိုင်းယှဉ်ရထားထွက်ပေးပါ ကာဗွန် 20x လျော့နည်း လေယာဉ်ထက်.
တိုတောင်းသောအချိန်အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, နှင့် CFL အပေါ်နေ့ကလက်မှတ်?
CFL တွင်မတူညီသောဘတ်ဂျက်နှင့်ခရီးစဉ်များ၏လက်မှတ်အမျိုးအစားများရှိသည်: စီးပွားရေးလား၊. ဒီလက်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုက CFL အမျိုးသားရထားပေါ်မှာလူဇင်ဘတ်မြို့ကိုဖြတ်ပြီးသင်၏ပထမတန်းစားခရီးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
အချိန်တို CFL လက်မှတ်များ:
အချိန်တိုလက်မှတ်သည် ၁ တန်းအတွက်သာဖြစ်သည်2validation ကို၏အခိုက်အနေဖြင့်နာရီ. သင်သည် CFL ရထားကွန်ယက်ပေါ်တွင်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမရှိဘဲခရီးသွားနိုင်သည်, အဆိုပါအချိန်ဇယားအရသိရသည်. သင်တိုတောင်းသောအသိပေးစာအပေါ်ခရီးသွားရန်ရှိပါက, သင်ဒီလက်မှတ်ရသင့်တယ်. သင်တစ် ဦး အထူးရထားမှကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်, သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်.
CFL Day လက်မှတ်သည်ကြာရှည်ခံသောပထမတန်းစားလက်မှတ်ဖြစ်သည်, သူတို့ပြtheနာ၏အခြိနျမှစ။ တရားဝင်သည်4နောက်နေ့. CFL Day ရထားလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်စက်မှသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်, လက်မှတ်ရုံ, သို့မဟုတ်ရထားသိမ်းဆည်းပါ.
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရွေးချယ်ထားသည့် CFL ရထားဝန်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်, လူဇင်ဘတ်မြို့အတွင်း, အခမဲ့ဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, CFL ကြေးပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ, သငျသညျ 1st အတန်းသွားလာရန်ပိုနှစ်သက်မဟုတ်လျှင်. မကြာခဏပြင်သစ်မှနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားသောလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသား, Flexway ပထမတန်းစားလစဉ်ဖြတ်သန်းမှုကိုခံစားနိုင်သည်, အဘို့ 85 €. ဖြည့်စွက်ကာ, လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသားများသည်လစဉ်လက်မှတ်များအတွက်ဂျာမနီသို့အနိမ့်နှုန်းကိုခံစားနိုင်သည်. ဒီတော့ဒီ့နောက်မှာနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေကိုဘယ်မှာရမလဲ?
– CFL လက်မှတ်ကောင်တာ.
– CFL ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းမှာ 2489 2489
ဒါဟာဒုတိယတိကျစွာပြောရန်ခက်ခဲသည်, သို့သော် Save Train ကိုသင်ရောက်ရှိမည်ဟုအကြံပေးသည် 30 သင်၏ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီမိနစ်ပိုင်း. ဒီအချိန်ဘောင်နှင့်အတူ, သင်လိုအပ်သည့်အရာများအတွက်လည်းစျေး ၀ ယ်ရန်အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရလိမ့်မည် သင့်ရထားခရီးစဉ်ကိုသွားပါ တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူသော.
လူဇင်ဘတ်က Koblenz ရထားစျေးနှုန်း
ဘယ်ဘူတာများကို CFL ကတာဝန်ယူတယ်?
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၏ CFL ဘူတာသည်မြို့လယ်တွင်ရှိသော Place de la Gare တွင်တည်ရှိသည်.
Troisvierges ၌တည်၏, CFL ရထား ထွက်ခွာခြင်းနှင့်လိုင်းပေါ်တွင်တည်ရှိ Troisvierges ဘူတာမှရောက်ရှိလာ 10, လူဇင်ဘတ်မြို့ကိုနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်သို့ဆက်သွယ်သည်. Troisvierges သည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းနှစ်ခုတည်ရှိသည်.
CFL ရထားများသည်လည်းပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Nancy မြို့သို့လည်းထွက်ခွာသွားကြသည်. CFL ရထားများသည်လူဇင်ဘတ်ဗဟိုဘူတာမှနန်စီသို့သွားသည် 1 နာရီ.
လူဇင်ဘတ်မှ Ghent နှင့် / သို့မဟုတ်ဘရပ်ဆဲလ်သို့ရထားဖြင့်ခရီးဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိဖလန်းဒါးစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်. CFL ရထားလူဇင်ဘတ်ကနေဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့အံ့သြဖွယ်မြို့ကြီးများမှနာရီတိုင်းထွက်ခွာနှင့် ဥရောပ၌ချစ်စရာကောင်း Old Towns.
စက်ဘီးစီးခွင့် CFL ရထား?
CFL ရထားများပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်, နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုသင်စက်ဘီးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေရာများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဖြစ်. CFL တံခါးများပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်အမှတ်အသားဖြင့်နေရာများသိုလှောင်ထားသောစက်ဘီးများကိုသင်ရှာနိုင်သည်.
ကလေးများသည် CFL ရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့ခရီးသွားလာကြပါ?
ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်သာအသက်အရွယ်အထိ 12 နှစ်ပေါင်း. ထက်ငယ်သောကလေးများ 12 နှစ်ပေါင်း, သူတို့အသက်အရွယ်ထက်အသက်ကြီးသူတစ် ဦး နှင့်အတူလိုက်ပါသွားလျှင်အခမဲ့ခရီးသွားလာနိုင်ပါတယ် 12, တရားဝင်လက်မှတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်အတူ.
ဟုတ်ကဲ့, CFL သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောခွေးများကိုချစ်သည်4ခြေထောက်များသည်လူသားများ CFL ရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့ခရီးသွားနိုင်သည်. ခွေးများသည် ဦး ဆောင်သူဖြစ်ရမည်.
ခရီးသည်တိုင်းသည်တရားဝင်လက်မှတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားကိုတင်ပြရမည်. မင်းရထားလက်မှတ်ပျောက်ပြီးဒါမှမဟုတ်မြန်မြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်, နှင့်ကြိုတင်လက်မှတ်မဝယ်ခဲ့ပါဘူး, သင်ရထားပေါ်မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်, CFL ကိုယ်စားလှယ်များမှ.
အများဆုံးတောင်းဆိုထားသော CFL FAQ – ငါ CFL အပေါ်ကြိုတင်ထိုင်ခုံမှာယူသလား??
အဘယ်သူမျှမ, CFL အမျိုးသားသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားပေါ်တွင်ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိပါ, မင်းနေရာလွတ်ရှိတယ်, ရထားလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုကြိုတင် ၀ ယ်လိုက်ရင်မင်းတို့နေရာလွတ်အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ.
CFL ရထားတွေမှာ Wi-Fi အင်တာနက်ရှိပါသလား?
အဘယ်သူမျှမ. သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် ရွေးချယ်ထားသော CFL ဘူတာတွင်အခမဲ့ Wi-Fi အင်တာနက်, သို့သော် Wi-Fi ကို CFL ရထားများတွင်မရရှိနိုင်ပါ.
လူဇင်ဘတ်က Ettelbruck ရထားစျေးနှုန်းကို
Junglinster ရထားစျေးနှုန်းသို့ Ettelbruck
သင်ဤအချက်မှဖတ်ပြီးပါပြီ, CFL ရထားတွေအကြောင်းသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိပြီးလာမယ့်ခရီးအတွက် CFL ရထားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ တစ်ဦးကရထား Save.
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.